Umthetho wabucala - Ifanele Of The Day
https://www.funneloftheday.com/ othatha ukhuseleko kwakho. Lo mgaqo-nkqubo wabucala uchaza oko siqokelela inkcazelo yobuqu nendlela esisebenzisa ngayo. Jonga le ncwadi umgaqo-nkqubo ukuze ufunde okungakumbi malunga nkqubo wabucala ngokubanzi.
Bonke abancedisi be web ukulandelela ulwazi olusisiseko malunga iindwendwe zazo. Le ngcaciso ibandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, dilesi IP, iinkcukacha browser, timestamps kunye namaphepha ebhekisela. Akukho yale ulwazi ngokobuqu ukuchonga iindwendwe ezithile kule sayithi. Le nkcazelo kulandelelwa ukulungiselela iinjongo zolawulo kunye ukunakekela.
Iikuki kunye Nezinto ze Web
apho kuyimfuneko, https://www.funneloftheday.com/ usebenzisa cookies ukugcina ulwazi malunga kukhetho undwendwe kunye nembali ukuze babakhonze ngcono undwendwe kunye / okanye phambi umtyeleli kunye nomxholo esingabizi.
Qaphela ukuba ungenza ukutshintsha izicwangciso zakho browser ukukhubaza cookies ukuba ukhathazeke wabucala. Ikhubaza cookies kuzo zonke iziza akukhuthazwa, oku kusengaphazamisana ukusebenzisa kwakho kwezinye iindawo. Eyona ndlela intle ku khubaza okanye Andinakwenza cookies qho site-nganye. Dibana amaxwebhu browser yakho imiyalelo ngendlela ukuvala iikuki kunye nezinye iindlela tracking. Olu luluhlu amakhonkco zolawulo web browser liya kube luncedo.
Iinkxalabo okanye imibuzo malunga nale nkqubo wabucala ingabhekiswa [email protected] ukucaciselwa nangakumbi.